MDC Alliance Inoramba Kuti Yakaenda kuAmerica Kunokumbira Zvirango
Mubatanidzwa weMDC Alliance
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance wati kushanya kwevamwe vatungamiriri vawo kuAmerica kwanga kuri kunobudisa Zimbabwe mumatope mairi uye kuti hurumende yaVaMnangagwa iite sarudzo dzejekerere.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, vanotungamirira bato rePeople’s Democratic Party, PDP, asi vari mumubatanidzwa weMDC Alliance, VaTendai Biti vati rwendo rwavo kuAmerica rwanga rwuri rwekunobatsira nyika yeZimbabwe kwete kunotsvaga zvirango zvehupfumi sezviri kutaurwa.
VaBiti vatsanangurawo vakati chinangwa cheMDC Alliance ndechekurwisa kuti nyika yeZimbabwe iite sarudzo dzejekerere. Vati shanduko yavanoda kuona inosanganisira kuremekedzwa kwebumbiro remitemo yenyika, kuumba voter’s roll yakachena, kusapindira kwemasoja munyaya dzesarudzo nezvimwewo.
MDC Alliance yasvorawo kupinda kwevechiuto mune zvematongerwo enyika pamwe nekuva makurukota ehurumende.
VaBiti vati kunyangwe hazvo kune dzimwe nyika dzakadai seAmerica masoja anenge ave pamudyandigere achipinda pazvigaro, chavanosvora ndechekuti vemauto vakabatsira kubvisa VaMugabe pachigaro ndivo vave kutopinda mune zvematongerwo enyika.
Mutevedzeri weMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaNelson Chamisa, avo vakaendawo kuAmerica, vawedzerawo vakati donzvo ravo nderekuchenesa nyika yeZimbabwe.
VaChamisa vatiwo kana mutungamiriri wenyika mutsva VaEmmerson Mnangagwa vakatadza kuratidza vekunze kwenyika kuti Zimbabwe ino remekedza bumbiro remutemo, ivo seMDC Alliance huye nechivimbo chavo kuti vari kuzopinda muhurumende mushure mesarudzo dzegore rinouya, vachachenesa chimiro chenyika kunze.
Mubatanidzwa weMDC Alliance uyu wakashoropodzwa zvikuru mumdandemutande pamwe nemumapepanhau nechivhitivhiti chehurumende uchinzi wakaenda kunokurudzira America kuti irambe yakaisa zvirango zvehupfumi.
MDC Alliance yachema-chemawo nekutadza kwehurumende yaVaMnangagwa kugadzirisa matambudziko ehupfumi vakati veruzhinji vari kuramba vachiomerwa nehupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu.